ओवरहेड छत रोशनी
ओवरहेड लुमिनायर एक सार्वभौमिक उत्पाद हो जसले उच्च गुणस्तरको प्रकाश व्यवस्था र घरको एकै समयमा आरामदायक वातावरण बनाउनेछ।
छत लुम्बिनी को छ?
एम्बेडेड छत लुम्बिनी को विपरीत, ओवरहेड मोडेलले छत डिजाइन मा नै ठाउँ लिदैन , तर वाहक भाग मा माउन्ट गरिएको छ।
निलम्बित प्रणालीको अनुपस्थितिको कारण तिनीहरू दुवै उच्च परिसर र कम अभिन्न छिलका लागि उपयुक्त छन्, छिटोको लागि विशेष क्लिप आवश्यक पर्दछ। वर्गीकरण एकदम व्यापक छ, क्लासिक मोडेलमा रूढ़िवादी सजावटबाट।
आधुनिक डिजाइनमा ओभरहेड छत लुम्बिनी को प्रकार
सबैभन्दा सामान्य मा प्लाफन्डको रूपमा एक शरीर छ। कारतूस परिवर्तन गर्न सजिलो छ, यो मानक तापक्रमित लैंप, हलोजन, डायोड र फ्लोरोसेन्स प्रकाश प्रयोग गर्न सम्भव छ। यो असामान्य गृहस्थलको कोठाको लागि राम्रो विकल्प हो। हल्का शक्ति बिखराउने छ, त्यो अधिकतम होइन। प्लेटफर्मको रूपमा छत छट्पटीहरू अक्सर प्राय: सही फारम छ, उदाहरणका लागि, राउन्ड। उत्पादनको मूल्य एकदम लोकतान्त्रिक छ।
फ्लोरोसेंट छत-माउन्ट गरिएको वर्ग लम्बाइ एक सामान्य समाधान हो। हल्का आँखाको लागि आरामदायी छ, तर प्रणालीले बारम्बार बारम्बार अफगानिस्तानलाई सहन सक्दैन। त्यसैले यस मोडबाट टाढाको स्थानमा स्थान छान्नुहोस्। यस्तो उपरि उपकरणको असुविधा भनेको चमक प्राप्त गर्न समय लाग्छ। हल्क डिजाइन सामान्यतया रूढ़िवादी छ।
डायोड छत रिचर्ड फिक्स्चरहरूले उपभोक्ताहरूको गुणस्तर र डिजाइनको विशिष्टतालाई आकर्षित गर्छन्। कम तापनि फैलावटले यसलाई छत डिजाइनमा समावेश गर्न सम्भव बनाउँछ, जहाँ प्रकाश स्थिरता को तापनि स्वीकार्य छ। मामला को मोटाई 14 मिलीमिटर सम्म पुग्न सकिन्छ, बिन्दु माउन्ट ओभरहेड लाइटको कम्पैक्टनेस कुनै पनि इन्टरनेटको लागी हो। घरको लागि छतको सतह एलईडीले राम्रो दिनको बत्ती बनाउँछ।
Raster luminaire - कार्यालय संस्करण, सामान्यतया एक आयताकार आवरण, विभिन्न ढाँचाहरु को ग्रिड संग सिलाई छ।
प्वाइन्ट मोडेलहरू सबैभन्दा पहुँचयोग्य कुनामा लेख्न सकिन्छ। Plafonds केवल ढाँचा छैन, तर विभिन्न लटकन संग पनि। लाइटको हल्का सिर्जना गरिएको छ। यो एक लिङ्ग कोठा को लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हो, कला नौव शैली, कम से कम, उच्च तकनीक मा एक बेडरूम। शास्त्रीय शैली अधिक उपयुक्त छ कि उपरी पालकहरू सामानहरूसँग: तिनीहरू कम्पाक्ट हुन्छन्, तर तिनीहरू धनी देखिन्छन।
स्ट्रीट छतले विभिन्न प्रकारका लैंपहरूसँग प्रकाश फिक्स्चर माउन्ट गर्यो - एक व्यावहारिक समाधान, किनकि यो कम से कम परेशानी हुनेछ, ऊंचाईमा सौंदर्यशास्त्र।
एल्युमिनियम छतको मक्का
स्व-स्लिङ्ग बल्क फ्लोर
घरको बाहिरी सजावटको लागि प्यानल
फूलहरूका लागि आफ्नै हातहरू कसरी गर्ने?
फोम प्लेट्स छतमा
क्लासिक शैलीमा भान्सा डिजाइन
बच्चाहरु को कोठा को सजावट - दीवारहरु र छत को सजावट को लागि उज्ज्वल विचार
काठ को लागि स्वयं चिपकने वाला फिलिम
भान्साको लागि प्यान्ट
तपाईंको हातले काठको चुरोट कसरी बनाउने?
Movalis - प्रयोगको लागि संकेत
उच्च रक्तचापको लागी लोक उपचार
प्रारम्भिक भेदभावको खतरा
कार्ल लेजरफेल्ड द्वारा इत्र
एक्वैरियममा पानी परिवर्तन गर्दै
एङ्लिकन चर्चमा स्टोन टाउन
सब्जदार पुलाव - ओवनमा वा हरेक स्वादको लागि विभिन्न सब्जियों संग एक बहुभाषी मा व्यञ्जनहरु!
अनिन्द्राबाट छुटकारा पाउन कसरी?
कसरी मानिस आकर्षित गर्न?
22 व्यस्त र सजिलो लागि छिटो कपाल पसलहरू
सुशी आमालाई नर्सिङ गर्न सकिन्छ?
बोर्डो ड्रेस - सबैभन्दा फैशनेबल साँझ, ककटेल र आकस्मिक संगठनहरू
कसरी टोड टाई गर्ने?
ग्रीष्मकालीन जूता - फैशनेबल चित्रहरु लाई मूल जूता संग
तालिकामा जन्मदिनको लागि प्रतियोगिता
प्याजको साथ फ्राइड कोड
गर्भावस्थाको समयमा मधुको साथ दूध
स्प्रिंग टाई कसरी गर्ने?
लिभर सिरोहोसिस मा एस्केट्स